China Fuel chiteshi Spill Container fekitari uye vagadziri | Jiasheng
Kavha: cast iron / Aluminium
Nheyo: mukomboni fiber
Kusungisa: simbi isina simbi
Kuisa mhete: simbi yakakandwa
Kukura: 403 * 403 * 418 5 uye15 galoni
Chidurura Container ndechekutora iyo leakage mafuta apo tanker iri kudzikisa. Izvo zvekuvhara ndeye Carbon Simbi (kana Aluminium), muviri kuomarara. Mutumbi wakaiswa muvhu yejecha, unokwanisa kudzivirira pesvedzero yekunze kudzivirira kudonha kwemudziyo. Yakasarudzika uye inonzwisisika dhizaini yekuita kuti ikwanise kuwana huremu hwetangi inotyaira pairi .Pane Drain Valve, kana uchidhonza vharafu iyi, inosunungura iyo yemukati mafuta inodzokera kune yepasi pevhu tanker Zvinhu
muviri zvinhu simbi
Kavha: simbi / Aluminium
Kuisa mhete simbi
Base remubatanidzwa faibha
kusungisa Simbi isina ngura
mafuta emafuta tanker Dururira Mudziyo Direction yezvinhu
1. Kuisirwa Nyore –zvisungo zvakanangana nepombi ine 4-riser. Inoderedza basa renzvimbo nguva uye yekumisikidza mitengo.Hapana chikonzero chekubvisa, cheka kana tambo inosimudza pombi
2. Unyanzvi - hunowanikwa mune yechokwadi 5gallon kugona.
3. Chivharo -
inowanikwa mune chero cast aluminium kana kabhoni simbi, iyi yakasarudzika dhizaini inosanganisa aseal mune yepazasi pevhavha. Zvigaro zvechisimbiso pakati pemadhamu maviri pamhete inokwira kusvika
kudzivirira mvura yemumvura kuti isapinde mumudziyo wemvura.
4. Fuel Compatibility -inogadzirirwa kutakura mafuta emangwana, anosanganisira methanol, ethanol nemafuta neMTBE zvinowedzera.
Pashure: Tanker Mafuta Kuendesa Kudonhedza Elbow
Zvadaro: Remote API Kuwedzeredza Valve
Iyo Optic Sensor yakaiswa muFuel Tanker Rori kana ichiita yepazasi kurodha basa, inozoona mamiriro emukati etangi, neplatifomu yeiyo yekuzadza system yekuona kuchengetedzeka kwepazasi kurodha kudzivirira kudonha. Optic Sensor, Optic Socket, uye Ground Blot, izvo zvikamu zvitatu zvinoita kuti Optic Sensor Kit yapasa iyo National Supervision uye Inspection Center 'Test Optic Sensor Tester ndeyekutarisa kubatanidza uye zvimwe zvikamu zveAnti-yekufashukira Sys ...
Pneumatic aruminiyamu chiwanikwa bhora vharafu
Type Type Flange Kure Hole Distance Basa Kudzvinyirira Range DN50 (2 ″) Aluminium Alloy 93 130 0.6MPA (-20 ℃, + 70 ℃) DN65 (2.5 ″) 122 155 DN80 (3 ″) 132 165 DN100 (4 ″) 155 197